Maraoka: Miresaka Momba Ny Fanahin’i Maraoka sy ny Daroka Baomba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Desambra 2017 3:01 GMT
Noho ny lahatsoratra iray tao amin'ny New York Times mitondra ny lohateny hoe “Ny Fanahin'i Maraoka”, sahirana miady hevitra momba ny marina amin'ity fanambarana ity ny tontolon'ny bilaogy Maraokana. Fez, tanàna manana mponina eo amin'ny 1 tapitrisa eo ho eo, no fantatra amin'ny maha-tanàna marevaka indrindra ao Maraoka. Amin'ny maha foiben'ny Oniversite Qarouyine, iray amin'ireo ambony indrindra sy fahiny indrindra manerantany izy, tsy lefy ny lazany.
Na dia izany aza, ao amin'ny firenena ahitana fiovàna haingana sy toekarena mitombo, maro amin'ireo mponin'i Fez no tavela.
“Right now, today, in 2007, Fez is also a ghetto in every sense of the word and most of its inhabitants are barely eking out a miserable subsistence living,” saysEverything Morocco, a foreigner living in the ancient Fez medina (town).
“Amin'izao fotoana izao, taona 2007, “ghetto” amin'ny dikan'ny teny rehetra i Fez ary miaina saika anaty fahantrana ny ankamaroan'ny mponiny”, hoy Everything Morocco, vahiny monina ao amin'ny Medina fahiny any Fez (tanàna).
Ny taamarbuuta an'ny The Morocco Report kosa dia manontany ny mampiavaka an'i Fez, milaza izy hoe “mety ho tahaka ny vatosoa any amin'ny lavaka lalin'ny fanatontoloana i Fez, saingy aiza ny tena izy amin'ireo Fassis hizahana tany?” (9 avrily 2007, “Ny fanahin'i Maraoka?” izay tsipahin'i The View from Fez tamin'ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Fez mifanandrina amin'i Meknes – ‘Fassis hizahana tany?‘” ary mihantsy ireo mpamaky ao an-toerana mba hitsidika an'i Fez.
Liosliath, avy ao amin'ny bilaogy Morocco Time, miditra amin'ilay resaka fanomezana anarana an'i Fez hoe fanahin'ny firenena, ary nilaza hoe “Mbola marobe ny Maraoka “tena izy” hita any ivelan'ny faritra lehibe fizahantany. “
Tao amin'ny molotry ny bilaogera Maraokana ihany koa ireo daroka baomba famonoan-tena vao haingana tany Casablanca. Taorian'ilay lehilahy iray, Abdelfattah Raydi, nanapoaka ny tenany tao amin'ny cybercafe tao Casablanca, nankany amin'ireo mpiray tanindrazana aminy ny polisy ary ny Talata teo, efa hisambotra olona maromaro no nanapoaka baomba tao anaty akanjony ny olona iray. Nitifitra olona iray hafa ny polisy, ary nanapoaka baomba ny fahatelo (izay fantatra fa rahalahin'i Raydi, Ayyoub), namono tena sy namono polisy, ary nandratra olona maro, anisan'izany ny ankizilahy iray. Ny Asabotsy maraina, lehilahy roa hafa no nanapoaka tena tao amin'ny bolevara Moulay Youssef any Casablanca, toerana misy ny Masoivoho Amerikana.
Loonsbury bilaogera ao amin'ny Aqoul kosa nanonona an'i Mohammed Faiz, tompon'ny cybercafe izay nanapoahan'i Abdelfattah Raydi baomba voalohany (izay simba tanteraka ny cybercafe, ka namela ny fianakaviany efa mahantra ho fadiranovana kokoa), mangataka amin'ny olona rehetra manana hevitra hifandray aminy mba hanamora ny famatsiam-bola ho an'i Faiz sy ny fianakaviany.
Bilaogera Maraokana Big World Learner mihiaka hoe: “Rà, horohoro, vatana voarasarasa, tanora manapoaka tena amin'ny baomba eny amin'ny toeram-bahoaka … Sarotra foana ny mino fa mitranga eto amin'ny firenentsika ireny!” (12 Aprily 2007, “Fampihorohoroana mamitaka“))
Bo18, bilaogera Maraokana am-pielezana manontany fohy hoe: “Tsia, am-pahamatorana, tsy voafehy intsony izany. Mihevitra tahaka izany koa ve ianao?”